EBEE KA ỊZỤTA OBERE DRAỊVA MPỤGA DỊ ALA MAKA LAPTỌỌPỤ / KỌMPUTA? - DISK - 2019
Ekele ndị niile gụrụ akwụkwọ.
Echere m na ọtụtụ (ma karịsịa ndị na-ese ọtụtụ foto, ndị nwere nnukwu nchịkọta nke egwu na ihe nkiri) echeworị echiche banyere ịzụta diski ike dịpụrụ adịpụ maka laptọọpụ (kọmputa). Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na ị jiri ya na diski ike mgbe niile, HDD na-enye gị ohere ọ bụghị naanị iji chekwaa ozi, ma na-ebunye ya ngwa ngwa site n'otu kọmputa gaa na nke ọzọ, ọ dị mfe iwe obere igbe na njem gị, wdg. N'eziokwu, ọ bụ obere akpa akpa nwere ike tinye ya n'akpa uwe.
N'isiokwu a, m ga-agwa gị otu m si ele anya na ị ga-ahụ ihe mgbochi dị ala. Mkpebi, lee njedebe nke isiokwu ahụ.
Ụdị disk nke a ga-achọgharị: mpụga; USB ejiri ya rụọ ọrụ (ọ na-esighi ike na ọgba aghara na wired ndị ọzọ, karịsịa maka laptọọpụ); 2.5 (ha dị ka kọmpat, gbakwunyere ikepụta disks dị otú ahụ site na USB, nke bụ ihe dị anyị mkpa); ike disk: 2TB (terabytes 2).
N'ozuzu, ọrụ dị mfe iji chọọ ngwaahịa dịgasị iche iche, gụnyere ihe mgbochi siri ike. Ọzọkwa, ọnụọgụgụ nke ọnụọgụ abụọ nke enwere ike ịtọ bụ nanị ịda mbà (e nwere ọtụtụ, ọ bụrụ na ọ bụghị otu narị otu narị).
* Ekpebiri m ịkwụsị na ya maka ịba ụba, ka e wee nwee ike iji ihe atụ.
Ịbanye nyocha ọchụchọ (lee n'elu na isiokwu - ụdị diski), anyị ga-ahụ nnukwu ndepụta nke diski na ọnụahịa dị iche iche na ụlọ ahịa dị iche iche. Nhọrọ site na ọnụahịa, anyị na-enweta ihe oyiyi na-esonụ (dị mkpa n'oge a ederede).
Obere ụgbọala dị ala nke dị ala karịa 2 TB na-efu maka ~3500 ete. Ọzọkwa, nke a na-enweghị na-echeba na nnyefe, nke dịka nhọrọ kachasị mma ga-abụ karịa ~150-300 ehicha.
Maka ego a ị nwere ike ịzụtaghị 1, kama 2 draịvụ ike!
Ụlọ ahịa China bụ AliExpress
(Ngalaba na mpụga hdd: //ru.aliexpress.com/premium/external-hdd.html)
N'ikwu eziokwu, m onwe m nwere obi abụọ nke ụlọ ahịa ndị China ruo ogologo oge ... Ma n'oge a, ekpebiri m ịnwale ya, karịsịa ebe ọnụahịa maka diski diski nke 2 TB bụ okpukpu abụọ dị ọnụ ala karịa ụlọ ahịa ọ bụla.
Dịka ọmụmaatụ, diski ike siri ike nke Samsung maka 2 TB na-efu 2,200 rubles. Kedu ihe na-adọrọ mmasị, nnyefe site na mail - maka n'efu! Lee nseta ihuenyo n'okpuru.
Enwere nhọrọ dị ọnụ ala (maka 1900 rubles. Dị ka ihe atụ, Seagate Slim 2 TB). Tụkwasị na nke ahụ, a na-enwekarị nkwalite na ego (ha nwere ike ịdị ezigbo mma, dịka ọmụmaatụ, mgbe ịzụrụ ngwaahịa 2 - ego ọzọ). N'ihi ya, maka 3500-3700 rubles. Ị nwere ike ịzụta 2 draịvụ ike 2 TB!
Site n'ụzọ, diski m họọrọ bịara na mail banyere otu ọnwa mgbe usoro. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, dị ka HDD nke m zụtara n'ụlọ ahịa ahụ.
Mkpebi na ịzụrụ naAliexpress
- ọnụ ala;
- Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ego (karịsịa ma ọ bụrụ na inye iwu n'oge kwesịrị ekwesị);
- nnukwu nhọrọ (ọ bụghị ụlọ ahịa ọ bụla ga-enye ọtụtụ ihe ndị dị otú ahụ);
- rue mgbe ị kwadoro nnata nke iwu ahụ, ụlọ ahịa ahụ na-emesi gị ike ma ọ bụrụ na ihe ọbụla - nkwụghachi (lee nlezianya oge ịgba akwụkwọ).
- Nbudata nke otutu ihe.
- a na - eziga diski site na mail n'ime otu ọnwa, mgbe ụfọdụ obere ntakịrị (ọ dịkarịa ala oge dị otú a na mbupu n'efu);
- enweghị ike ịchọta ngwongwo (n'ime ụlọ ahịa ị nwere ike ịjụ ka a nyochaa gị, gosipụtara n'ihu gị otu esi edepụta, ihichapụ faịlụ site na diski);
- nkwanye ụgwọ (ọ na-atụ egwu ọtụtụ);
- Mgbaghara obi abụọ na ngwongwo (ọ bụrụ na ị nwere ike ịbịa ụlọ ahịa ahụ nwere ihe nkwarụ, mgbe ahụ, ọ na - esiri ike. Ị ga - eme akwụkwọ ozi ahụ: ogologo ma dị egwu .Ọ bụ ezie na ị gwa eziokwu ahụ: M nyere iwu ọtụtụ ngwaahịa na ụlọ ahịa a: ihe nile batara n'ụzọ nkịtị, ajụjụ gbasara ngwá ọrụ ma ọ dịghị arụmọrụ Site na ahụmahụ onwe onye: ọbụna na ụlọ ahịa ọ bụla, ihe mgbagwoju anya nwere ike ịmalite site n'iweghachi ihe ngwongwo azụ.E nwere ahụmahụ dị mwute -
Oh, site n'ụzọ. Ọ bụrụ na ibudata faịlụ site na iyi ahụ gaa na draịvụ ike mpụga, njehie nwere ike ịpụta na diski na-adaba na ọsọ ọsọ nke faịlụ ahụ ga-ada. Ana m akwado na ị ga - ebuli Utorrent ka nke a ghara ime -
Ndị niile nwere obi ụtọ!